Malunga nathi -Shenzhen Yrsooprisa Pro Beauty Co., ltd
3pcs-8pcs Iseti yebrashi
I-9pcs-15pcs yokuseta i-Brush
16pcs-25pcs Iseti yebrashi
26pcs-35pcs Iseti yebrashi
Ukucwangciswa kwamehlo okuSeta
Ubuso bePro Pro
Ukupheliswa kobuso obuBini
Ipro Pro Brushes
Ukupheliswa kwamehlo kweBrashi
Ukukhupha umoya kwiCushion
Inkqubo ye-OEM ODM
Ishenzhen Yrsooprisa Pro ubuhle Co., ltd.
indawo eShenzhen, China, lishishini lobuchwephesha eligxile kuphando nakuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kweebrashi zokuhombisa, iibrashi zobugcisa bezikhonkwane kunye nezinye izinto zokuthambisa.
Singumvelisi wokuqala, nomgangatho ophezulu, inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nexabiso lokhuphiswano, lisenza ukuba sidume phesheya.
Asingowomzi-mveliso wokudibanisa kuphela, kodwa kukwangumzi mveliso wezinto ezisetyenzisiweyo. Ke sinokuthatha ulawulo olungcono lwexabiso, ukujongana nexesha kunye nomgangatho.
Umzi mveliso wethu ugubungela indawo engaphezulu kwe-3000 yeemitha zesikwere, abasebenzi bemigca yokuvelisa abantu abangaphezulu kwe-100 ngoku. Umatshini unenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho, wadlula umgangatho wolawulo lomgangatho we-ISO9001, ISO14001. Ngalo lonke eli xesha, kwiimpawu ezininzi ezaziwayo zasekhaya nakwamanye amazwe i-OEM.
Iminyaka yamava kuPhando noPhuhliso, uyilo, ukuvelisa kunye nentengiso yamanye amazwe yeemveliso zokwenza izinto, i-YRSOOPRISA yenza ukubonelela ngezixhobo ezahlukeneyo zokwenza; Ukusebenza ngokukuko ukubonelela ngexabiso elinokhuphiswano, umgangatho ophezulu, iimveliso ezikhuselekileyo kubaxhasi bethu.
Ngokukodwa, sinokubonelela ngeemveliso ezenziwe ngokwezifiso, uphuhliso lobungcali kunye noyilo, olwenzelwe wena kunye nolwenziweyo. Ukuba nezinto ezininzi zokubumba zethu zabucala kunye nelungelo elilodwa lomenzi kunye neempawu zorhwebo, Yenza iimveliso zakho zikhetheke ngakumbi.
Iimveliso zethu lithunyelwa eYurophu, North America, mpuma Asia, Middle East, Umzantsi Melika kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Sinezinto ezingaphezu kwe-1 000 ezenziwe ngebrashi kunye nezixhobo zokuthambisa.
Ngophuhliso oluqhubekayo lwenkampani, iimveliso ezininzi ngakumbi nangakumbi ziya kuqaliswa kwimarike yamazwe aphesheya.
UMsunguli wethu "uHanne Chen", ebekwiNtengiso yeHlabathi kunye neNtengiso ukusukela ngo-2008, uqhelene kakhulu nomzi mveliso wonke kunye nemarike yamanye amazwe. Ebebambelele kule nkolelo ”Ubungcali & noMthengi kuqala”
Siyavuya ukukunika eyona nkonzo ibalaseleyo kwaye siyakholelwa ukuba siza kuba negalelo kwimpumelelo yakho kwishishini.
Ukuba nabani na onomdla kwi-OEM / UKWENZIWA KWEENKQUBO / ODM, Wamkelekile ukuba eze kuthi xa ufuna iinkcukacha ezingaphezulu.
Umenzi wobuchwephesha bezixhobo zokuzenzela ze-OEM / i-ODM / EZIYENZIWEYO / ZOKUGQIBELA LABEL.
I-Shenzhen YRSOOPRISA Pro Ubuhle Co., Ltd.